Mediaproxy သည် Vidrovr ရှာဖွေမှုစွမ်းရည်ကို LogServer တွင်ထည့်သွင်းသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Mediaproxy LogServer သို့ Vidrovr ရှာဖွေရေးစွမ်းရည်ထည့်သွင်း
Mediaproxy LogServer သို့ Vidrovr ရှာဖွေရေးစွမ်းရည်ထည့်သွင်း
မဲလ်ဘုန်း, သြစတြေးလျ - 15 ဇူလိုင်လ 2019 - Mediaproxyဆော့ဖ်ဝဲ-based IP ကိုထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးသည် Vidrovr လုပ်ငန်းကိုဗီဒီယိုရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းများ၏ပေါင်းစည်းမှုမှတဆင့်၎င်း၏ LogServer အိုင်ပီ-based သစ်ထုတ်လုပ်ရေး, စောင့်ကြည့်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆော့ဖ်ဝဲ၏စွမ်းရည်များကိုတိုးချဲ့နေပါတယ်။ အဆင့်မြင့်စက်သင်ယူမှုနည်းစနစ်ကိုသုံးပြီး, ဤလူများ, စာသား, အသံများနှင့်အမြင်အာရုံအကြောင်းအရာအပါအဝင် tags များအမျိုးမျိုးသုံးပြီးရိုက်ကူးရှာဖွေစစ်ဆေးအော်ပရေတာနိုင်ပါတယ်။
ယနေ့ပလေးအောက်သိုလှောငျစနစ်များအစီအစဉ်များကြီးမားတဲ့အရေအတွက်ကမဆံ့နိုငျသညျ။ Mediaproxy LogServer ပြီးသားပစ္စည်း, logged စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူကိုက်ညီစေရန်ဆန်းစစ်ခံရဖို့ခွင့်ပြု, ဦးဆောင်လိုက်နာမှုအစီအစဉ်ကိုဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကသက်သေထူခဲ့သည်။ Vidrovr များ၏များအပြင်သီးခြားခေါင်းစဉ်အဘို့အကြီးမားတဲ့စာကြည့်တိုက်မှတဆင့်ရှာဖွေပြီးတော့ဗွီဒီယိုတစ်ခုအတွင်းသတ်သတ်မှတ်မှတ် sequences and features တွေခွဲထုတ်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုမှန်ကန်စေသည်။
LogServer မြင်ကွင်းစုံပေါ်သူတို့ကိုဖော်ပြရန်အဖြစ်မော်နီတာနှင့်အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်စွမ်းနှင့်အတူ, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် OTT ရင်းမြစ်များမှတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစ, On-ဝေဟင်ဖြစ်စဉ်များ log ဖိုင်တွေအတွင်းရှာဖွေမှုများကိုလုပ်ဆောင်ပါကြော်ငြာများကိုအတည်ပြုရန်နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာမှပစ္စည်းထုတ်ဝေရန်နိုင်ပါတယ်။ Vidrovr စက်သင်ယူမှုအပေါ်အခြေခံသည်နှင့်၎င်းတို့၏တိကျသောလိုအပ်ချက်များနည်းပညာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အဆုံးသည်အသုံးပြုသူများနှင့် တွဲဖက်. တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလုံးစုံစီမံခန့်ခွဲဝန်ဆောင်မှုကိုထုတ်လုပ်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစီးအဖြစ်မော်ကွန်းတိုက်ရှာဖွေပေးနိုင်သည်။
Vidrovr များ၏ပေါင်းစည်းမှုမှတဆင့် LogServer ယခု High-end အင်္ဂါရပ်များအနေဖြင့်လက်ရှိအကွာအဝေးတိုးမြှင့်ကြောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတစ်အကွာအဝေးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည်: ဗီဒီယိုလက်ငင်းပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး, ကလစ်ပ်၏အမြန်ထုတ်ယူမှုနှင့်ထုတ်ဝေ; ဒီလိုအသိအမှတ်ပြုလူတွေကပြကွက်များ, တွင်မျက်နှာပြင်စာသား, မှူးများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအဖြစ် meta tag များ, အသုံးပြု. ရှာဖွေနိုင်စွမ်း။
Mediaproxy, ဂျိုးအဲလစ်, CEO နဲ့ Vidrovr ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်အတူပူးပေါင်းအပေါ်မှတ်ချက်ပေး, ကျနော်တို့ကဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်မှု, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်လိုက်နာမှု၏အရေးပါလယ်ပြင်၌ရှိသောခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်စေခြင်းငှါအလွန်ပျော်ရွှင်နေကြသည် "ဟုဆိုသည်။ အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ Mediaproxy အတူမျှဝေနည်းပညာပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူအခြေစိုက်စခန်းအကြားပူးပေါင်းအဖြစ် Enabled မီဒီယာများ၏စိတ်ကူးတစ်ခုနားလည်မှုဖြစ်ပါတယ်။ Vidrovr နှင့် LogServer များ၏ပေါင်းစပ်ကြောင်းတစ်လက်တွေ့ကျတဲ့ဥပမာဖြစ်၏။ "
Erik အော့တို, Mediaproxy ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်, LogServer မှ Vidrovr ၏ထို့အပြင်အဆိုပါကုမ္ပဏီနှစ်ခုနှင့် Mediaproxy ရဲ့ကြီးထွားလာအသုံးပြုသူအခြေစိုက်စခန်းဘို့နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ဦးအလွန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ် "ကထပ်ပြောသည်။ နှစ်ဖက်စလုံးကကြီးမြတ်နည်းပညာများရှိသည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့တပြင်လုံးကိုစိတျအပိုငျးမြား၏ပေါင်းလဒ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအနေအထားကနေလာမယ့်နေကြသည်။ အတူတူကျနော်တို့အလွယ်တကူနဲ့ထိထိရောက်ရောက် linear အသံလွှင့်ခြင်းနှင့် OTT န်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးအတွက်အရေးပါသောအစစ်ဆေးမှုများထွက်သယ်ဆောင်နိုင်သောအလွန်အစွမ်းထက် tool ကိုကမ်းလှမ်းနေကြတယ်။ "
Vidrovr တစ် granular အဆင့်မှာအကြောင်းအရာ ingests နှင့်အညွှန်းကိန်းတစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဗီဒီယိုရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်: လူများ, စာသား, အမြင်အာရုံအကြောင်းအရာနှင့်အသံ tag ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းပေးထားသောဗီဒီယိုဝေမျှတိကျတဲ့ရှာဖွေစုံစမ်းမှုမှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်နှင့်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုကဲ့သို့သူတို့ကိုတက်အစေခံရာနားလည်နိုင်သည်။ 2016 ကတည်းက Vidrovr ၎င်းတို့၏ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာနှင့်ပိုမိုလုပ်ဖို့အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ powering နှင့်၎င်းတို့၏ဗီဒီယိုအားပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ပိုကောင်းငွေရှာခြင်းအတွက်အလားအလာ enable လုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့ Workflows ကို automation ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Vidrovr အားလုံးအဓိက Third-party ကဗီဒီယိုအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူပေါင်းစပ်ခြင်းထောက်ခံပါတယ်နှင့်ရဝုဏ်-ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မိုဃ်းတိမ်၌ဖြစ်စေ stream ကိုဗီဒီယိုအကြောင်းအရာနေထိုင်ကြသည်။ ယနေ့တွင်အဓိကထုတ်လွှင့် segment ကိုတိုက်ရိုက်စီး Video Intelligence, အညွှန်းကိန်းဖို့ Vidrovr ဖြေရှင်းချက်ကိုသူတို့ Real-time နဲ့ Archive ဗီဒီယိုကို collection များကို အသုံးပြု. , ပြီးတော့ထုံးစံအဖြူရောင်တံဆိပ်ရှာဖွေရေး interfaces မှတဆင့်ရလွယ်ကူတဲ့ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းသူတို့ရဲ့ထုတ်ဝေပလက်ဖောင်းနှင့်တိုက်ရိုက်စားသုံးသူမှနှစ်ဦးစလုံးသူတို့အားဗီဒီယိုများပေါ်လာကြသည် -use ထောက်ခံချက်စနစ်များကို။
2001 ကတည်းကကမ္ဘာအဝှမ်းမှအင်ဂျင်နီယာများကရာပေါင်းများစွာ, 24 /7စောင့်ကြည့်မှု, analysis multiviewing နှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် OTT ရင်းမြစ်များမှတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးဘို့ Mediaproxy ရဲ့စုစည်း software ကိုဖြေရှင်းချက်အပေါ်နေ့စဉ်အားကိုး။ 4K, HEVC အပါအဝင်နောက်ဆုံးပေါ်ပုံစံများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများအဘို့ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ SMPTE 2022-6, SMPET 2110, NDI, HLS ဖွ, MPEG-Dash နှင့်ဒီဗွီဘီ-2, Mediaproxy web browser ကိုနှင့်မိုဘိုင်း interfaces အသုံးပြုရလွယ်ကူမှတဆင့် On-ဝေဟင်ဖြစ်ရပ်, အကြောင်းအရာရှာဖွေရေးနှင့်ကြော်ငြာစိစစ်အတည်ပြု၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကျစ်လစ်။ လက်ရှိထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် IP ကို ​​streaming များစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူ compliant, Mediaproxy အားလုံးကိုလက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းကို support စာတန်းထိုး, ဒီဗွီဘီစာတန်းထိုး, SCTE-35, SCTE-104 နှင့်အသံကျယ်။ မြေပြင်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ, မိုဃ်းတိမ်, ထုတ်လွှင့်စောင့်ကြည့်မှု, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်လိုက်နာမှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအားလုံးကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ဖျော်ဖြေနိုင်ပါသည်။
Fiona Blake က
MCR နှင့်ဗွီဒီယိုဥရောပမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်အဖြစ်ကြေငြာခြင်း - ဇွန်လ 23, 2020
Densitron သည် JAA Systems (JAA.S) ကိုမလေးရှားတွင်ပထမဆုံးဖြန့်ချိသူအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည် - ဇွန်လ 15, 2020
Mediaproxy သည်ထုတ်လွှင့်သူများအားဝေးလံသောလုပ်ငန်းအသွားအလာ၏စိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီသည် - ဇွန်လ 8, 2020
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ လိုက်နာခြင်း enabled မီဒီယာ FOR-A, မူကွဲစနစ်များ, ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော တိုက်ရိုက်ကဗီဒီယို သစ်ထုတ်လုပ်ရေး LogServer MachineLearning Mediaproxy OTT SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဗီဒီယိုကစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု Vidrovr 2019-07-15
နောက်တစ်ခု: Globecast IBC 2019 ကို Preview